Yechina RC yeKernel 4.12 yaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Yechina RC yeKernel 4.12 yaburitswa
Semagariro svondo rega rega, RC nyowani vhezheni yeLinux kernel 4.12 yaburitswa. Izvi zvinoreva kuti kuvandudzwa kweKernel kunoenderera zvakajairika uye kuti pane zvishoma uye zvishoma kuti vhezheni yekupedzisira ibude ichienda mumigwagwa yedu munzira yakagadzikana.
Iyi vhezheni haina shanduko zhinjiChii chimwe, ine zvishoma pane zvakajairwa. Icho chikonzero ndechekuti vazhinji vevagadziri vari pazororo rezhizha, sezvo kunyange Linux geniuses inofanirwa kutora kuzorora nguva nenguva.
Kunze kwemazororo, hapana chero zvikanganiso zvakawanikwa mu Wechitatu RC, yatakakurukura pano nguva pfupi yadarika. Iyo yega iyoyo zvave zvaitwa kwave kunatsiridza akasiyana madhiraivha akasiyana Hardware zvikamu, senge akaomarara dhiraivha, giraidhi makadhi, uye zvimwe zvekushandisa zvishandiso.
Hapana mubvunzo diki kwazvo yekuvandudza, asi zvichidikanwa, sezvo sekuziva kwako, pakati pe7 kana 8 Shanduro dzeRC dzinowanzodikanwa kuti dzibvise zvachose Kernel yakagadzikana. Idzi shanduro dzinoburitswa nechinangwa chekutarisa kugadzikana kwesystem pasina kukanganisa kukanganisa kwevashandisi.
Zvakare, pane nguva apo kunyangwe aya maRC shanduro dzisingakwani. Pane dzimwe nguva, zvinoitika kuti yekutanga yakagadzika vhezheni inouya nemamwe mhosho inouraya izvo zvakagadziriswa muzvinyorwa zveRC, izvo zvinofanirwa kugadziriswa ipapo ipapo, sezvakaitika neKernel 4.8. Neichi chikonzero, ivo havafunge iyo kernel yakanyatso gadzikana kusvikira iyo yekutanga kugadzirisa ichiburitswa. Mune ino kesi, vhezheni 4.12.1 ichave yekutanga vhezheni yakakodzera kushanda munzvimbo dzekuvandudza.
Chero zvazvingaitika, unogona edza iyi yazvino vhezheni kurodha pasi semazuva ese Kernel.org. Nekudaro, haina kugadzikana uye inogona kunge iine mabugs, saka zvinofanirwa kucherechedzwa kuti haina kukodzera kushandiswa munzvimbo dzekuvandudza kana michina ine ruzivo rwakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Yechina RC yeKernel 4.12 yaburitswa